काठमाडौंमा केबलकार निर्विकल्प - Karobar National Economic Daily
query_builderFebruary 14, 2017 9:31 AM supervisor_accountश्याममोहन श्रेष्ठ visibility1250
विश्वभरि नै सहरी बसोबास बढ्दै गएका कारण सबैजसो मझौला सहरहरू मेगा सिटीमा परिणत भइसकेका छन् । गाडीहरूको अत्यधिक चापले काठमाडांैका सडक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूको तुलनामा अति साँघुरा छन् ।
काठमाडौं, पाटन सहरमा हालसम्म केही सडक मात्र दुई, तीन वा चारका छन् । यी सडकले सवारी साधन तथा पैदलयात्रुको चाप थेग्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको विकल्पमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका कार्यहरू ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले केही अघि झन्डै ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरी काठमाडौंमा मेट्रोको सम्भाव्यताबारे कोरियाली कम्पनीलाई अध्ययन गराइसकेको छ । हाल सरकारले मेट्रो तथा मोनोरेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन अघि बढाएको सुन्नमा आएको छ ।
पाँच वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार कुल ६७ किमि लम्बाइ योजनाको लागत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल त्यो लागत ४ सय ५० देखि ५ सय अर्ब पुग्नेछ । यसरी हेर्दा प्रतिकिमि झन्डै रु. ८ अर्ब लाग्ने देखिन्छ ।
नयाँ अध्ययन गरी रकम जुटाउने बेलासम्म यो लागत प्रतिकिमि १० अर्ब मूल्य नाघ्न सक्छ । मेट्रो बनाउने योजना सहरका लागि अति नै खर्चिलो र गाह्रो देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र, बजेटको क्षमता, नेपाली जनताको क्रयशक्ति हेर्दा यत्रो ठूलो लगानीका लागि विदेशी लगानीको विकल्प देखिन्न ।
काठमाडौंको जमिनमुनिको भित्री भाग तरलीकृत अवस्थामा छ भन्ने भूगर्भविद्हरूको भनाइ छ । यो भनेको पानी, माटो र बालुवाले बनेको भित्री जमिनको बनोट हो । यसको अर्थ हो, धेरै ठूला संरचना बनाउनका लागि यहाँ धेरै गहिरो जग खन्नु उपयुक्त हुन्न ।
केही वर्षयता सहरी क्षेत्र केबलकारको प्रचलन बढेको छ । केबलकारले २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार यात्रु प्रतिघण्टा ओसारपसार गर्न सक्छ, जुन काठमाडौंको अवस्थाअनुसार पर्याप्त हुन्छ ।
जमिनमुनि धेरै ठूला संरचना बनाउनु पनि उपयुक्त छैन । यस्तो योजना गर्नैपरे अत्यन्तै खर्चिलो हुन आउँछ । काठमाडौंका अधिकांश सडक अति नै साँघुरा छन् । मेलम्चीको पानीको पाइप बिछ्याउने कामबाट जनता र यातायातलाई कति कठिनाइ प-यो ।
मेट्रो खन्ने काममा त योभन्दा १० देखि ४० गुना ठूलो काम हो । त्यो कसरी सम्भव होला र ? मोनोरेल सहरी क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रबाट बाहिर जान–आउनका लागि बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
यसको सञ्चालनका लागि सडकको बीचमा सिमेन्टका पिलरहरू खडा गरी त्यसमाथि सिमेन्टकै पुलमा रेल बनाई निर्माण गरेको पाइन्छ । यो मेट्रो बनाउनुभन्दा कम खर्चिलो र निर्माणका हिसाबले केही सहज हुन्छ । फेरि काठमाडौंका साँघुरा सडकका कारणले मोनोरेल बनाउने काम त्यति सहज छैन ।
मेट्रोको निर्माणभन्दा कम गाह्रो भए पनि ठूला पिलर तथा माथि ठूला कंक्रिटका पुलहरू बनाउनुपर्ने भएकाले वर्षैभरि ट्राफिकमा असर पर्छ । अर्को, निर्माणको लागत प्रतिकिमि हालको मूल्यमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ ।
विभिन्न समस्याका कारण कतिपय निर्माणाधीन मोनोरेलको योजना स्थगित भएको समेत पाइन्छ । कतै वर्षौं चलिसकेको सिस्टमलाई पूरै बन्द गरिएको पनि देखिन्छ ।
मुम्बईमा सन् २००९ मा मोनोरेल बनाउन सुरु गरेकोमा निर्माणकार्य ५ पटक लक्षित म्याद नाघी अन्त्यमा फेबु्रअरी २०१४ मा सम्पन्न भयो ।
त्यो बेलाको लागत प्रतिकिमि २ सय ४० करोड भारु थियो । यस्तै समस्याका कारण २०१५ मा स्थानीय सरकारले अब कुनै पनि मोनोरेल नबनाउने निर्णय गरेको छ । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा १९८८ मा निर्माण सम्पन्न गरी चलाएको मोनोरेलमा विभिन्न समस्या आएपछि २०१३ मा बन्द ग-यो ।
मेट्रो वा मोनोरेलमा आफ्नो लाइनबाहेक पनि बीच–बीचमा स्टेसनहरू बनाउन जमिनमुनि वा जमिनमाथि अति नै ठूलो ठाउँ चाहिन्छ । त्यसैले काठमाडौंका सडक र सहरको बनावटले यस्तो सिस्टम बनाउन त्यति सम्भव देखिन्न ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या पुगेको मानिएको छ । तथापि कामदारवर्गको जनसंख्या अन्य ठूला सहरहरूको तुलनामा निकै कम छ । त्यसकारण मेट्रो वा मोनोरेलको प्रयोग क्षमता अति कम छ ।
केबलकारले २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार यात्रु प्रतिघण्टा ओसारपसार गर्न सक्छ, जुन काठमाडौंको अवस्थाअनुसार पर्याप्त हुन्छ । यसले गर्दा हालको बस, माइक्रो बस तथा टेम्पोका ट्राफिक चाप कम गर्न राम्रो मद्दत मिल्नेछ ।
केही वर्षयता सहरी क्षेत्र केबलकारको प्रचलन बढेको छ । अन्कारा, काराकास, बोगाटा, मेडलिन, लापाज, मेक्सिको सिटी, लिमा, सान्टा डोमिडो, लेगोआस आदि सहरमा यसको निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
यसले पर्यटन उद्योगलाई पनि निकै सघाउ पु-याएको छ । यात्रुहरूको आवतजावतमा ३०–४० प्रतिशत समय बचत भएको छ । वायु प्रदूषण पनि निकै घटाएको छ । यसकारण काठमाडौंको यात्रु, ट्राफिक, प्रदूषणको चाप आदिलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न केबलकार अति उपयुक्त देखिन्छ ।
यो मेट्रो र मोनोरेलको तुलनामा सस्तोमा निर्माण हुन्छ । योजना थालनीको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसक्छ । यसमा कंक्रिटको काम पनि न्यूनतम हुन्छ । सहरलाई सुन्दर यातायातका साधन दिलाई पर्यटकहरूलाई समेत सस्तो सुविधाजनकको यातायात प्रदान गर्न सकिन्छ ।
यसको लागत प्रतिकिमि १.५ देखि २ अर्बसम्म पर्न सक्छ । काठमाडौंका सडकको ट्राफिक बोक्ने क्षमता क्षीण भइसकेको अवस्था छ । अतः आकाशलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि सहरी केबलकार सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
(लेखक नेपाल–फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।)